किन गन्हाउँछ सास ? यस्तो छ रहस्य - Internet Sansar
Home / Health / किन गन्हाउँछ सास ? यस्तो छ रहस्य
internetsansar October 9, 2019	Health Comments Off on किन गन्हाउँछ सास ? यस्तो छ रहस्य 270 Views
झट्ट हेर्दा सामान्य देखिएपनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताईरहेको हुन्छ । यहीकारण साथीभाईबीच मात्र नभई पति पत्नीबीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छन्, मानिसलाई लाजमर्नु बनाउछ मुखको दुर्गन्धले ।मानिस जतिसुकै सुटेडबुटेड देखिएपनि मुख गन्हाउने भन्ने बित्तिकै उसको व्यक्तित्व निकै तल्लोस्तरमा पुग्न सक्छ । खासै गम्भीर नभएपनि मुख गन्हाउने समस्यामा खानपानका अलावा केही स्वास्थ्य समस्या जिम्मेवार हुन्छन् । तर, यसबाट सजिलै छुट्कारा पाउन सकिन्छ । पाचन क्रिया सही नभएपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउछ । वास्तवमा हामीले खाने खानाको रस हाम्रो पेटभित्र कुहिन थालेपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ ।
यसका साथै कब्जियत, पेटमा घाउ, रक्सी सेवन, दाँत तथा गिजाको समस्या भएकाहरुमा मुख गन्हाउने समस्या हुन्छ । मुखको दुर्गन्धको समस्याबाट बच्न दैनिक कम्तीमा पनि दुईपटक ब्रस गर्नुपर्छ र जिब्रो सफा राख्नुपर्छ । दाँतको समस्याका कारण मुख गन्हाउने भएकाले नियमित परीक्षण गराउनुपर्छ । एन्टीब्याक्टेरियल तत्व हुने भएकाले ग्रीन टीले पनि मुख गन्हाउने समस्या कम गर्छ ।यस्तै, चुरोट सेवन गर्ने मानिसमा पनि मुख गन्हाउने समस्या हुन्छ । यस्तो मानिसले बढी पानी पिउनुपर्छ । मिन्टवाला चुइङगम चपाउन पनि सकिन्छ । तर, चुईङगम सुगरफ्री भए राम्रो हुन्छ ।
केही घरेलु उपाय अनारको बोक्रा पानीमा उमालेर कुल्ला गर्नाले, सुख्खा धनिया चपाउनाले, तोरीको तेलमा अलिकता नुन मिसार दैनिक एकपटक दाँत तथा गिजाको मालिस गर्नाले पनि दुर्गन्ध कम हुन्छ । यस्तै, तुलसीको चार–पाँच वटा पात दिनहु खाएर पानी पिउनाले, एउटा ल्वाङ मुखमा राखेर चुस्नाले र खाना खाएपछि आधा चम्चा सौंफ चपाउनालेपनि खाना पच्ने र मुख गन्हाउने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यति गर्दा पनि दुर्गन्ध हट्दैन भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
Previous मोटोपना घटाउन के-के गर्नुपर्छ ?
Next यस्ता हात छन् भने तपाइँ धनी बन्ने निश्चित